Home News Dad Laga Soo Celiyay Dalka Eritrea Oo Maanta Laga Soo Dajiyay Muqdisho
Dad Laga Soo Celiyay Dalka Eritrea Oo Maanta Laga Soo Dajiyay Muqdisho
Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray 56 Qof oo Soomaali ah, kuwaas oo ahaa Tahriibayaal laga soo celiyay dalka Eritrea.
Maryan Yaasiin Ergeyga arrimaha Tahriibayaasha ee Madaxweynaha Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in hawlgalka bad baadinta Tahriibayaasha maanta lagu soo celiyay 56 Qof oo isugu jira wiilal iyo Gabdho.
In dadkaan dalkooda dib loogu soo celiyo waxaa dowladda Soomaaliya ka taageertay hay’adda Muhaajiriinta Caalamka ee IOM.
Dadkan ayaa laga soo qaaday Xerada Qaxootiga Shakarab ee dalka Eritrea iyo Soohdinta dalka Suudaan oo la wadaago dalka Eritrea.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii dalka loogu soo celin lahaa dadka u badan dhallinyarada ee ku dacayan daafaha Caalamka.
Previous articleMW Axmad Madoobe: “ cid gooni ah go’aan kama gaari karto qaabka doorasho dalka uga dhaceyso, horay uma dhici, mana dhici doonto , taladda dalka…..”
Next articleHay’adaha ku guulaystay fulinta Waxbarashada Madaniga Oo Uu Dhex Maray Wasaarada Dastuurka
Dowladda Mareeykanka oo Wali ku Qanci La’a Dalab Dowlada Soomaaliya Uga...